I-PUBG Mobile vs Call of Duty Mobile - Ukuqhathanisa okuningiliziwe - Ukudlala
Eminyakeni yamuva impi yempi isibe ngomunye wemikhakha edlalwa kakhulu emhlabeni. Amakhulu ezinkulungwane zabantu angena nsuku zonke kuma-akhawunti abo futhi amahora amaningi adlala imidlalo yokulwa.
Njengoba iningi lonjiniyela ligxile kuphela kumakethe ye-console / PC, kukhona imisebe yethemba yabadlali beselula. Ingxenye ehamba phambili ukuthi imahhala. Kulokhu okuthunyelwe, sizobe sihlola izihloko ezisezingeni lomdlalo. Uyiqagele ukuthi yi-PUBG Mobile (Player Unknown Battlegrounds Mobile) kanye neCall of Duty Mobile.
Ufuna ukudlala i-Cross Platform Games? Bheka uhlu lwethu Imidlalo Engcono Kakhulu Yesiphambano ngo-2020.
I-PUBG Mobile vs Call Of Duty - Ukubuka konke
Kulesi sigaba, sizobe sidingida ukubuka konke okuyisisekelo kwayo yomibili imidlalo futhi sinikeze imininingwane emincane ngayo yomibili le midlalo. Cabanga ngalokhu ingqikithi yezinye izigaba.
I-PUBG Mobile: Ukubuka konke
Ngokulandwa okungaphezu kwezigidi eziyi-100, i-PUBG iguqule ikusasa lemidlalo yeselula. Manje sekuyinto yokulinganisa ukwahlulela ukuthi ngabe ifoni inezinto ezinhle zekhompyutha. Noma yomibili le midlalo inesipiliyoni esifanayo se-Gameplay, iPUBG Mobile inendlela ehlukile maqondana negeyimu.
Yize ingeyinhle njengendatshana yomdlali oyedwa, bayaqiniseka ukuthi bafaka indaba ethile ngezikhathi zonyaka zokudlula empini. Noma kunjalo, udaba lwendaba aluxhunywanga nhlobo. Njalo isizini iqala ngevidiyo entsha yesingeniso, bese uya lapho. Imidwebo inamandla kakhulu, futhi igeyimu inyukela kuma-FPS angama-90.
I-Call of Duty Mobile: Ukubuka konke
Ukulanda kuyafana kweCall of Duty. Kodwa-ke, kwafika unyaka owodwa ePUBG Mobile. Ukubizelwa umsebenzi bekuhlala kukulo mdlalo. Noma ngabe yikuphi ukuthambekela okuyi-Call of duty, qiniseka ukuthi bayayilandela. Kuliqiniso nakulesi simo. Noma yakhishwa kamuva kwi-PUBG Mobile, yathola ukuthandwa ngenxa yabalandeli bayo be-hardcore.
Abantu bebekhuluma ngalo mdlalo nangaphambi kokuba ukhishwe. Ihluzo azikho ngaphansi kwePUBG Mobile. Imishini yokudlala imidlalo ingolunye uhlobo, futhi ukunakwa ngemininingwane kuzokwenza ukuthi imihlathi yakho yehle.
Yebo, lokhu kungenye yamamethrikhi abaluleke kakhulu lapho umuntu ahlulela khona umdlalo. Yize yomibili le midlalo inohlobo olufanayo ake sibone ukuthi ngubani oza phambili ngemidwebo.
I-PUBG Mobile: Imidwebo
Umdlalo ikakhulu uqukethe iSmooth, Balanced, HD, HDR, Ultra HD (Ultra HD eyi-4K). Njengoba umdlalo ubuya emuva ku-2018, imidwebo yayingeyinhle ngaleso sikhathi. Kodwa-ke, ngezibuyekezo eziqhubekayo, ihluzo zithuthukile.
Umdlalo wafuna kakhulu i-hardware engcono. Ngenxa yalokhu, bekufanele bakhiphe uhlobo lweLite olwehlise imidwebo. Noma isikhala sigcinwa sanda imidwebo singaphezulu kwesilinganiso ngokuhamba phambili. Akunakwa kangako emininingwaneni. Lo mdlalo unobubanzi be-8X okusho ukuthi ihluzo ezikude kufanele zibe zinhle, kepha cha, umdlalo awukwazi ukuwandisa, kunalokho ngenkathi ukukopisha umuntu kufanele akhiphe amehlo akhe esikrinini.
I-Call of Duty Mobile: Graphics
Izinketho zokuqhafaza nezinga lozimele zimi kanje: Phansi, Phakathi, Phakeme, phezulu kakhulu, kuMax. Lokhu kungenye yehluzo ezinhle kakhulu ezibonwe kumdlalo weselula. Ngenxa yomlando wabo kwezokudlala, imidwebo mihle impela njengoba benolwazi. Ukunakwa kwemininingwane kuhle kakhulu, kusukela ekuboneni izinhlamvu zindiza ziye egazini liphuma lapho abantu benza umonakalo.
Noma ngabe udubula izinhlamvu ngokhuni noma ngezitini, ungabona izingcezu zigawulwa. Ibanga lokubuka lihamba phambili; Izimo zokuhlwitha zilungele kangcono lo mdlalo. Izinketho ezinjengokujula kwensimu, isithunzi sesikhathi sangempela, nokulwa nokuhlaziywa kuyatholakala ezingatholakali kulabo abancintisana nabo. Imodi yabadlali abaningi ibuyisa izinkumbulo ngo-5 V 5 ukufanisa.
Ukuqhathaniswa Kwezindlela ze-InGame:
I-PUBG Mobile: Amamodi we-InGame
Ngayo yonke inkathi kunama-LTM amasha afakiwe. Kodwa-ke, i-PUBG ine-classic, i-arcade, i-arena, nelebhu yokudlala. Izindlela ezimbili eziphawuleka kakhulu ezenziwa yi-arcade ne-classic. Ngokwakudala, uzokwazi ukudlala ukufana okulinganiselwe, futhi amameshi akho azosuselwa kakhulu ekwenziweni komdlalo okususelwa ekhonweni, kepha e-arcade akuyona indaba. Ku-arcade, udlala imidlalo emincane efana neqembu elibulala ukufa nempi engazithinti nhlobo izinhlu zakho.
Amabanga ePUBG ngethusi, isiliva, igolide, iplatinamu, idayimane, umqhele, i-ace nomnqobi. Njengoba ukwandisa amakhono akho, usuka ethusi uye kumnqobi. Kumodi yakudala ungadlala nabangani bakho kuma-Squads noma kuma-duos, uma ungenayo, i-PUBG Mobile iqinisekisa ukuthi uyadlala njengoba inemodi yodwa nayo.
I-Call of Duty Mobile: Amamodi we-InGame
Uyini umdlalo weCall of duty ngaphandle kwemodi ye-zombie? Lo mdlalo uhlukaniswe izingxenye ezintathu — i-Battle royale, iZombies, nabadlali abaningi. Abadlali abaningi yiwo wonke amakholi womdlalo owake wenzeka. Uma uke wadlala i-Call of duty, khona-ke uzozibona lezi zindlela: phambili, umdlalo wokubulala weqembu, ukubusa, ukusesha nokubhubhisa. Kodwa-ke unakho okukhethwa kukho kokubili ukulinganisa okulinganiselwe nokungafakwanga, lokhu ngeke kuthikameze amabanga akho empi.
Imodi yempi yokulwa ithatha impande efanayo ne-PUBG Mobile ngokususelwa ezinhlwini zakho uzofaniswa nabaphikisi. Izikhundla zimi kanje: Rookie, Veteran, Elite, Pro, Master, Legendary. Kulezi zigaba, i-rookie incane kunazo zonke, futhi edume kakhulu kunazo zonke.
I-PUBG Mobile: Amamephu
Kukhona iqoqo elikhulu lamamephu aqukethe zonke izinhlobo zezulu ongazicabanga. Amagama amamephu ami kanje: Erangel, Miramar, Vikendi, Sanhok. I-Erangel yidolobha elijwayelekile elifana nemephu futhi liyisisekelo impela somdlalo wempi royale. IMiramar izinze esifundeni sogwadule kanti iSanhok isuselwa esimweni sezulu esipholile. IVikendi yindawo ebandayo, embozwe yiqhwa.
IShanok imephu encane; yingakho ungakhetha ukungena kuyo uma ungenaso isikhathi sokudlala. Imephu ethandwa kakhulu yi-Erangel, njengoba isilinganiso se-loot spawn siphezulu impela futhi akunakwenzeka ukuthi ufike ku-hotspot ungatholi mpango. Kodwa-ke, lawa mabalazwe anqunyelwe kumodi yakudala kuphela; ama-LTM ngokuvamile aqukethe uhlobo lwe-zombified lwemephu, okusho ukuthi kungahle kube khona ama-tweaks okushintsha ukubonakala kwemephu.
I-Call Of Duty Mobile: Amamephu
Ngempi yempi, banemephu eyodwa kuphela, kepha kubadlali abaningi baneqoqo elihle kakhulu lamamephu. Lokhu kuzoba uhambo phansi komgwaqo wememori. Amamephu ami kanjena: Cross-fire, Standoff, Crash, Killhouse, Firing range, Nuketown, Takeoff. Onke lawa mabalazwe ayekhona ku-Call of duty enhle yakudala.
Kodwa-ke, lawa mabalazwe atholakala kuphela kubadlali abaningi, futhi ungakhathazeki; uzonikezwa amazinga ngokwendlela osebenza ngayo. Ngakho awulahlekelwa kakhulu. Futhi akusona leso sikhathi esidlayo njengoba umdlalo wabadlali abaningi usuphelile kungakapheli ndaba yemizuzu.
Ukuqhathaniswa kwezibhamu / kweLoot Pool:
I-PUBG Ucingo: Izibhamu / indawo yokubhukuda
Iqukethe zonke izibhamu ezidumile kusuka ku-AKM kuya ku-M4A1. Omakhenikha bezibhamu bahle impela ngamaphethini wokufafaza anembile. I-SMGS izoba nephethini yesifutho eqondile kanti izibhamu zokushaya zine-curvy spray pattern; yingakho uzodinga ukuyazi kahle. Ifanelekile ukukhuthaza imishini yezibhamu eyenza umdlalo ube mnandi kakhulu. I-loot spawn ilunge impela, futhi maningi amathuba okuthi uzothola isibhamu uma ufika ezindaweni ezinezindawo ezinezimvubu zemephu.
Ukuphanga ama-Ammos nakho akuyona inkinga njengoba isilinganiso se-spawn siphezulu impela. Kodwa-ke, uma ungaphezulu kwe-sniper, khona-ke kukhona amabhokisi okulahla ane-AWM azokujabulisa. Ngamafuphi, lo mdlalo unokuthile kwawo wonke umuntu.
I-Call of Duty Mobile: Izibhamu / iphuli echibini
Banedamu lokuphanga elifanayo ne-PUBG Mobile, kepha ukukhuthazwa akulona uphawu. Iningi lezibhamu alinayo iphethini yokufafaza, futhi ngandlela thile lizwa ukuthi i-auto-aim ihlala ivuliwe. Mhlawumbe banama-bots amaningi. Kodwa-ke kulo mdlalo, kusetshenziswa amagama angempela ezibhamu, ngakho-ke lokho kungenzeka kube ukuphela kwenzuzo ngaphezu kwePUBG Mobile.
Kulesi sigaba, sizoxoxa ngokuwina ngokunaka yonke imigomo esixoxe ngayo ngenhla.
Imidwebo:Ucingo lweDuty Mobile.
Izindlela ezingaphakathi kwegeyimu: Ucingo lweDuty Mobile.
Amamephu:Ucingo lomsebenzi weselula.
Izibhamu / ichibi lokuphanga:PUBG Iselula.
Ngenxa yalokho iCall of Duty Mobile iyanqoba kule mpi engapheli. Yize iPUBG inezinzuzo zayo, iCall of duty mobile ingama phezulu kochungechunge lokudla. Sazise ukuthi yimuphi umdlalo owusekelayo kumazwana abekiwe.
uhlu lwamahhala wamakhodi wesipho sama-amazon
indlela esheshayo yokuthola amakhadi wesipho samahhala we-amazon
ukuwa ngawe i-roblox id
Uhlelo lokusebenza lwe-chromecast lokuwina 10
mp3 isiguquli se-youtube ku-mp3
ungayithola kanjani indwayimane ye-sling mahhala